အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 5
သစ်ကောင်းအိမ် ● မိသားစု (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဒီကမ္ဘာလောက် လှတဲ့ကမ္ဘာ …. ဘယ်ကမ္ဘာမှာမှ မရှိဘူး။ No tags for this post. Related posts...
ဆောင်းယွန်းလ ● ပါကင်မဖွင့်ရသေးတဲ့ အရိပ်တွေ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတွေးကို ပြန်ရေးချဖို့စိတ်ထဲမှာ ပြန်တွေးနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာမြေပူနွေးလာခြင်းဟာ မျက်နှာထားစရာ ရေခဲတောင်တွေရှားပါးလာခြင်း သတင်းဖြစ်တယ် နားရှိရုံလောက်နဲ့...
ဆောင်းယွန်းလ ● လွတ်မြောက်ခြင်းထဲက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခြင်း (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ ထိုင်နေရင်းက လွတ်မြောက်သွားပုံများ လမ်းလျှောက်ရင်း လွတ်မြောက်သွားပုံများ အဆုံးမှာ အစွန်ဆိုတဲ့နေရာတခုတော့ရှိသေးတယ် လွတ်မြောက်ခြင်းကို ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် တည့်တည့်ကြည့်ကြတာချင်းအတူတူ အဖြေက တစောင်းဖြစ်လိုက်...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Jump through hoops
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Jump through hoops (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ No tags for this...